न्यूयोर्क मा महापुराण र मन्दिर निर्माण किन आवश्यक ?
HOME » न्यूयोर्क मा महापुराण र मन्दिर निर्माण किन आवश्यक ?
डिसी नेपाल , १८ भाद्र २०७४
अनु खड्का । न्यूयोर्कमा भर्खरै मात्र नेपालका बाचन प्रविण श्री दीनबन्धु पोख्रेलबाट दुर्गा मन्दिर र कम्युनिटी सेन्टरको लागि महापुराण सम्पन्न भयो । केही समय पहिला राम्रा र नराम्रा सबै खाले प्रतिकृयाहरु आए तर पनि मन्दिर निर्माण जस्तो पवित्र कार्यको लागि नकारात्मक प्रतिकृया दिनु पक्कै पनि राम्रो होइन । यस्तो शुभ कार्यको लागि सबैले साथ र सक्दो सहयोग गरी एक असल नागरिकको परिचय दिएर आफ्नो कर्तव्य बोध गर्नुपर्छ । हामी सबै जुट्यौ, सबैले हातोमालो गर्यौं जसको परिणाम स्वरुप महापुराण सफल भयो। महापुराणका आयोजक तथा सहयोगको हात अगाडि बढाउनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरुले प्रवासमा रहेका नेपालीहरुबीच एकताको सन्देश दिएको कुरा सबैमा अवगत छ।
अमेरिकामा नेपालीहरुको उपस्थिति बढ्दै गएको अवस्थामा नेपाली कला, संस्कृति र परम्परा रक्षाका लागि सांस्कृतिक केन्द्रको आवश्यकता निकै रहेको छ । मन्दिर र केन्द्र निर्माणले दोश्रो पुस्ताका लागि पनि नेपाली संस्कृति हस्तान्तरणमा उल्लेख्य टेवा पुग्ने बताउँछन् । संस्थाले यसअघि पनि दाताहरुसँगबाट सहयोग संकलन गरी मन्दिर तथा केन्द्रका लागि जग्गा खरिद गरिसकेको छ । हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल अनि हाम्रो संस्कृतिलाई हामीले चिनेनौं र आफ्नो कला संस्कृतिको जगेर्ना भएन भने हाम्रो अस्तित्व रहँदैन । हामी मात्र नभर्इ हाम्रा नयाँ पिँढीलाई पनि कला संस्कृतिको महत्व बुझाउन जरुरी छ। 'रिजबुड नेपाली सोसाइटी' ले आफ्नो महान कार्यको थलनी गरेको छ। यस्तो पुण्य कार्यको थालनी गर्ने महानुभावहरुप्रति हामी न्यूयोर्क बासीहरु सधै आभारी छौं ।
न्यूयोर्कमा महापुराण र मन्दिर निर्माण यसकारण पनि आवश्यक छ:
१. न्यूयोर्कमा महापुराण र मन्दिर निर्माण कत्तिको महत्व भन्दा पनि निकै महत्व छ, किनभने अमेरिकामा हाम्रो कला सँस्कृति, मठ मन्दिरहरु देखेर पनि कतिपय पर्यटक नेपाल भित्राउन सकिन्छ ।
२. मन्दिर निर्माणले हामी नेपालीहरुलाई हाम्रो हिन्दू धर्मको महत्व र धार्मिक भावना जगाउँछ ।
३. मन्दिर हाम्रो पहिचान हो । हामी सबैलाई जोड्ने काम गर्दछ । आजको मन्दिर भोलिको इतिहास हो । साथै भावी सन्ततीहरुको लागि सुनौलो उपहार पनि हो ।
४. कम्यूनिटी सेन्टरले हाम्रो नेपाली समुदायको दु:ख पीडा पीर मर्का एक अर्कामा दु:ख सुख बाँड्ने थलो बन्नेछ भन्ने कुरामा कुनै दुर्इ मत छैन ।
५. महापुराण र मन्दिर निर्माणले सबै नेपालीहरुमा भाइचाराको अभिवृद्धि गरी हामी नेपाली एक हौं भन्ने सन्देश बिश्वलाई दिएको छ ।
६. हामी नेपालीहरुको आफ्नै मन्दिर हुँदा, हामीलाई कसैले हेप्न सक्दैन तसर्थ हामीले हाम्रा विभिन्न सामाजिक कार्यहरु सहजै सम्पन्न गर्न सक्छौं । यो भावी पुस्ताहरुको नासो हो । त्यसैले यसको निर्माण अभियानमा लागौं ।
परापूर्व काल देखि नै नेपालमा पुराण लगाउने परम्परा हुँदै आएको हो । दानवीरहरुले आफ्नो गच्छे अनुसार दान दिएर यस्तो पवित्र अभियानमा साथ दिँदै आएका छन् । यस्तो महान र पवित्र कार्यलाई रोक्ने र निचो देखाउने भन्दा पनि स्वच्छ मनले पुण्य कमाउनु हाम्रो कर्तब्य जस्तो लाग्छ । यस्तो पवित्र कार्यमा भाँजो हाल्न खोज्ने तथा भाँड्न खोज्नेहरु जो सुकै हुन् ती हामी नेपालीहरुको भलो चिताउने हुनै सक्दैन । जजस्ले साथ दिए, कसैले सकेर दिए भने कसैले सक्ने आशामा दिए । दानवीरहरु हाम्रो सच्चा मित्रहरु हुन् । समाजमा राम्रो काम गरौं, एकले अर्कालाई साथ दिउँ, जहाँ गए पनि, जहाँ रहे पनि कहिले नभुलौँ: मानव धर्म भन्दा पवित्र र ठूलो कुरा संसारमा मा अरु केही छैन ।